खर्बाङ समाचार : सामुदायीक वन र होटल व्यावसायीको भेला सम्पन्न – ebaglung.com
खर्बाङ समाचार : सामुदायीक वन र होटल व्यावसायीको भेला सम्पन्न
२०७४ असार १, बिहीबार २१:४२	अन्य समाचार
कमल पौडेल, खर्बाङ २०७४ असार १ । डुडेवाचौर सामुदायीक वन उपभोक्ता समिति वडिगाड गाउँपालिका वडा नं. २ खर्वाङको उपभोक्ता भेला सम्पन्न भएको छ। भेलामा कोषाध्यक्ष मन वहादुर थापाले ११ लाख १० हजार ६२ रुपैयाँ वरावरको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
भेलाले सो रकमलाई समुहका सदस्यहरुलाई लगानी समेत गरेको छ। भेलामा सल्लाहकार संयोजक नन्दराम खरेल, लेखा समिति सदस्य रत्न वहादुर सापकोटा लगाएतले वोलेका थिए ।
कार्यक्रम उपाध्यक्ष मेघनाथ खरेलको अध्यक्षता तथा सचिव टंक भुजेलको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो। सामुदायीक वनले समुदायमा रचनात्मक कार्यक्रमहरु पनि संचालन गर्दै आएको छ।
यसैवीच पासाङ ल्हामु सामुदायीक वन उपभोक्ता समिति बडिगाड २, खर्वाङको उपभोक्ता भेला डुडेवाचौरमा सम्पन्न भएको छ । भेलामा कोषाध्यक्ष कालिका खरेलले ५ लाख ४२ हजार ८ सय रुपैया वरावरको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिईन् । सो रकमलाई असुलि गरी पुन लगानी गरिएको थियो। भेलाले शेषकान्त मैदान वालविकास केन्द्रलाई ७५ हजार नगद तथा २१ हजार वरावरको काठ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै चण्डीथान प्राविलाई २ हजार ४ सय वरावरको छात्रवृत्ति वितरण गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। त्यस्तै भूसंरक्षण कार्यालय बागलुङमा दरम तथा वडीगाड खोलाको किनारमा तटवन्धको लागी तारजाली माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भेला अध्यक्ष माया देवी घिमिरेको अध्यक्षता, सचिव डिप्लोमा खरेलको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो । खोलाको किनारको वगर क्षेत्रमा रहेको सो सामुदायीक वनलाई महिलाहरुले व्यावस्थापन गर्दै आएका छन्। सानो क्षेत्रवाट पनि वढि लाभ उठाउन सफल भएका महिलाहरुले निरन्तर सामाजिक क्षेत्रमा रकम लगानी गर्दै आएका छन्।
यसैगरी खर्वाङ होटल व्यावसायी संघ वडीगाड गाउँपालिका वडा नं. २ को त्रैमासिक भेला खर्वाङमा सम्पन्न भएको छ । भेलाले होटलमा सरसफाई, गुणस्तरीय खाना मा ध्यान दिन सवैलाई आह्वान गरेको छ । यस्तै होटलको गुणस्तर वृद्धिको लागी एक आपसमा तालिम संचालन गरि व्यावसायलाई थप व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ । भेलामा कोषाध्यक्ष लाल वहादुर केसिले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । भेला अध्यक्ष धन वहादुर वुढाको अध्यक्षता, तथा सचिव दिलिप पुनको संचालनम सम्पन्न भएको थियो।
बागलुङ जिल्लामा परिवार नियोजनका साधन प्रयोग ३२ प्रतिशत मात्र !
अधिकारीचौरमा कृषिमा आधारीत क्षमता बिकास गोष्ठि